Nametraka ny filatsahan-kofidiny: nanamafy ny fahavononany amin’ny valim-babena i Dama | NewsMada
Kitra – Na teo aza ny ady sahala tamin’ny Elefanta…: efa any Kameronina ny tongotra ilan’ny Barea, hatreto
Les Barea et les Eléphants se neutralisent: un but magistral d’Amada
Nametraka ny filatsahan-kofidiny: nanamafy ny fahavononany amin’ny valim-babena i Dama
Par Taratra sur 11/08/2018
Tsy hihemotra. Efa naneho ny fahavononany ary nanamafy izany tamin’ny fanaterana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina i Dama Mahaleo.
“Nahoana kay ny olona ety, no noana fahavaratra?”. Fanontaniana efa napetrak’i Dama, ampolo taona maro, nialoha izao io, tanatin’ny hirany. Hitondra ny vahaolana, hanentana ny mpiara-belona hifantoka amin’izay amin’ny “valim-babena ho an’i Madagasikara” ity mpanakanto ity.
Fantatra mantsy fa nametraka ny taratasy filatsahan-kofidina ho filoham-pirenena, tetsy amin’ny lapan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana etsy Ambohidahy, i Dama sy ny mpanara-dia azy, omaly. Fanehoana ny fahavononana hiroso lalina aminy raharaham-pirenena, araka ny efa natsidiny ela io.
Vinan’asa mafonja, mifototra amin’ny valim-babena ho an’ny tany, ny fampivoarana ny olombelona izay mivelona aminy, no ezahin’i Dama voizina amin’izao dingana lehibe nirosoany izao. “Fotoan-dehibe ahafahan’ny tsirairay mandray anjara amin’ny valim-babena hanorenana an’i Madagasikara io fifidianana io. Miankina amin’izay ny hoe firenena vanona rahampitso”, hoy ny nambaran’ity kandidà ity.
Zo ny Aina
Saika haondrana antsokosoko any Dubai…: Saron’ny ladoany eny Ivato ny volamena 15kg 23/11/2020
Suspicion de favoritisme: LP pour le DG de l’ACM 23/11/2020
Miisa 31 ny tranga vaovao: tafakatra 251 ireo lavon’ny Covid-19 23/11/2020
Star-Fondation Coca-cola: fanampiana “Coke Hiray vatsy” 23/11/2020
BMOI: Banky voalohany eny By Pass 23/11/2020